वर्षातसँगै बुढीगंगा नदी थुनिने खतरा
गगन अयडी ??????
२०७६ असार २६ बिहीबार २०:४९:००
वर्षातसँगै बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका र बुढीगंगा नगरपालिकाबीचमा रहेको बुढीगंगा नदी थुनिने खतरामा बढेकाे छ । पानीकाे बहाव बढ्दै जाँदा त्रिवेणी नगरपालिका-९ मा पहिरो खस्न थालेपछि नदी थुनिने खतरामा रहेको वडाध्यक्ष ९ का वीर बहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
'हिउँदमा पनि पहिरो खस्ने गरेकाे थियाे । खासै असर थिएन । वर्षातमा नदी थुनिने खतरा हुँदा खतरा रहेकाे छ,' स्थानीयबासी तुला बहादुर खत्रीले भने, 'लगातार पहिरो बढ्दै गए जुन बेला पनि नदी थुनिन सक्ने खतरा छ ।'
नदी थुनिने खतरासँग खेती योग्य जमिन, झुलङ्गे पुल र साँफे-मार्तडी सडक खण्ड उच्च जोखिममा परेकाे छ । यस्तै, जिल्लाकाे ताप्रिसेरा, सेरा बगर, मौरे, अछामको बुढाबगर, साँफेबगरलगायत केही स्ठान उच्च जोखिममा परेकाे छ । नदीमा जोखिम बढेपछि केही परिवार घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा बसाइ सरेका छन् ।
#नदी # खतरा
एकपछि अर्काे वेबसाइट ह्याक, के खतरामा छन् सरकारी वेबसाइट ?
मित्रो ! खै कहाँ छ महाकाली नदी ?
ट्रम्पको स्वैरकल्पनाले सबैलाई डुबाउने खतरा